Umsele wokuthengisa: Uyini futhi wenzeleni | Izindaba ze-ECommerce
Umsele wokuthengisa: Uyini futhi wenzeleni?
El ifanele yokuthengisa Yaziwa nangokuthi ifanele yokuthengisa, futhi iyithuluzi elibaluleke kakhulu le-eCommerce namuhla, kepha ababaningi abayinikeza ukubaluleka okuyifanele.
Ngakho-ke, ngezansi sifuna ukukusiza wazi ukuthi yini ifaneli yokuthengisa, yenzelwa ini nokuthi ungayenzela kanjani i-eCommerce yakho ukuze wenze, njengoba igama liphakamisa, ukuthengisa okuningi ebhizinisini lakho. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani?
1 Uyini umsele wokuthengisa
2 Iyini i-funel yokuthengisa
3 Izigaba zefaneli yokuthengisa
4 Izinzuzo zefaneli yokuthengisa ebhizinisini lakho
5 Ungayenza kanjani ifaneli yokuthengisa ye-eCommerce yakho
5.1 Esigabeni sokuheha
5.2 Esigabeni sesiphakamiso
5.4 Futhi kwezinye izigaba?
Uyini umsele wokuthengisa
Umsele wokuthengisa, ebizwa nangokuthi ifanele yokuthengisa, empeleni uchungechunge lwezigaba umsebenzisi adlula kuzo lapho efika kuwebhusayithi yakho aze abe yikhasimende.
Ake sithathe isibonelo. Ake sithi ufuna incwadi. Uyifaka enjinini yokusesha bese uthola amawebhusayithi amaningi anayo. Ngakho uchofoza eyodwa. Uzofunda amazwibela futhi, uma uthanda, futhi intengo ilungile, uzoyinika ukuthi ithenge.
Isivele ikunqola yakho ebonakalayo, kepha ayithengwa, kepha isinyathelo esilandelayo kungaba ukucubungula i-oda, lapho, kulokhu, basicela imininingwane yomuntu siqu ukuthumela umkhiqizo futhi basinikeze inani lokugcina ngokuthumela izindleko. Lapha kungenzeka ukuthi uqhubeke noma ucabange ukuthi kubiza kakhulu bese ukushiya. Kuphela lapho i-oda seliphelile, okungukuthi, selithengiwe ngeqiniso, lapho kuthiwa umsele wokuthengisa usuphelile, ngoba umsebenzisi udlule ezigabeni eziwubhalayo.
Umsebenzi wakho ukuhamba nabasebenzisi ukuze inqubo iqhubeke ngokushesha futhi kalula ngangokunokwenzeka.
Iyini i-funel yokuthengisa
Manje njengoba sekucacile kuwe ukuthi ifaneli yokuthengisa iyini, yisikhathi sokwazi ukuthi ilusizo kangakanani. Futhi ngukuthi abaningi basala bodwa neqiniso lokuthi isebenza ukuheha abasebenzisi futhi ibaguqulele kumakhasimende. Kepha ngokuqinisekile akunjalo; Kukhona okunye okuningi. Okuqondile:
Kukusiza ukwakha ukwethembana. Udinga umuntu ovakashela iwebhusayithi yakho ukuthi azizwe ekhululekile, futhi uthembe ukuthi, uma bekucela okuthile, bazokuthola futhi ngeke ugcine imali yabo.
Uguqula abasebenzisi babe ngamakhasimende. Kuyinjongo esetshenziswa kakhulu nokusetshenziswa kwemiphongolo yokuthengisa.
Ukhulisa inzuzo. Ngokuba nesikimu sabasebenzisi sokuba babe amakhasimende, ubakhange futhi ubanikeze okuthile okubenza bakhethe ibhizinisi lakho, uzokwandisa ukuthengisa kwakho, futhi ngakho, nokukhokha kwakho.
Izigaba zefaneli yokuthengisa
Ngaphambi kokuthi sikutshele ukuthi ifaneli yokuthengisa yakhiwe ngochungechunge lwezigaba okuhle ukuzazi. Lokhu ikakhulukazi yilokhu okulandelayo:
Amanzi. Kuyisigaba sokuqala, isikhathi lapho umsebenzisi azi khona ikhasi lewebhu, kungaba ngokukhangisa, noma ngezinjini zokusesha, izincomo, njll. Nasi isidingo sokuthenga, kepha hhayi ukuzimisela ukuthenga kuwebhusayithi yakho kepha qala ukubheka ukubona ukuthi uyakuqinisekisa yini.
Ipheshana. Lapho lowo msebenzisi eqala ukucabanga ukuthenga umkhiqizo, ungena kulesi sigaba, ngoba umsebenzisi ubanjiwe futhi manje kulapho ebheka ukuthi kufanele awuthenge umkhiqizo esitolo sakho noma cha.
Ithuba. Umsebenzisi unesithakazelo emikhiqizweni oyithengisayo, futhi ukhuthazwa ngisho nokuyifaka enqoleni yokuthenga ukuze ayibambe. Kepha akakasithathi lesi sinyathelo.
Ukufaneleka. Ngokuya ngezintshisekelo umsebenzisi anazo, kunikezwa iziphakamiso zeminye imikhiqizo engaba nentshisekelo kuye.
Ukuvala. Kuyisigaba sokugcina, lapho umsebenzisi eba yikhasimende ngoba ulandela zonke izinyathelo kuze kuqedwe i-oda.
Izinzuzo zefaneli yokuthengisa ebhizinisini lakho
Noma ngabe unebhizinisi elincane noma inkampani enkulu, inhloso yakho ukuthengisa kumakhasimende. Imikhiqizo noma izinsizakalo. Kepha kulokhu kufanele ube necebo lokuthola wonke umuntu oza enkampanini yakho noma ebhizinisini eliku-inthanethi ukuthi athenge kuwe.
Yilapho kungena khona imingcele yokuthengisa. Kepha awukutholi nje lokhu. Bangu izinzuzo eziningi okufanele wazi Njengoba:
Yazi ukuthi yini okulindelwe amakhasimende akho. Ngamanye amagama, ukuqonda kangcono abakufunayo, ukuthi bafunani nokuthi yini abakubona kukubi. Lokhu kutholakala ngemikhankaso eyenziwe ngezifiso.
Thuthukisa umkhiqizo. Ngoba ngokugxila kokusebenzayo, uvikela ukuchitha isikhathi.
Khombisa ivolumu yokuthengisa. Njengoba ifaneli yokuthengisa ikuvumela ukuthi wazi ukuthi bangaki abasebenzisi abahamba ukusuka esigabeni sokuqala kuya esigabeni sokugcina, futhi wenze ukuguqulwa okuhlukile kulowo nalowo ukuthuthukisa umphumela.
Ungayenza kanjani ifaneli yokuthengisa ye-eCommerce yakho
Njengoba ubonile ngaphambili, ifaneli yokuthengisa yakhiwe ngezigaba eziningana, futhi lezi yizo futhi ezizokutshela ukuthi ungasenza kanjani esisodwa. Ngokuvamile, kufanele ugcine engqondweni.
Yisigaba abantu abaningi abaya kuso. Ngakho-ke, kufanele ucabangele iphrofayili yabasebenzisi abangahle babe nentshisekelo. Isibonelo, cabanga ukuthi ufuna ukuthengisa ukhilimu owonakalisayo. Into ejwayelekile kakhulu ukuthi ukhankase ukuyikhangisa ukuze wonke umuntu ayazi. Kepha kuzohlala kunezethameli ezithile zakhe, njengabesifazane abanezinwele eziningi, noma amadoda afuna ukunakekela ukubukeka kwawo.
Inhloso yakho lapha ukusesha yini abantu abayidingayo ukuze bakwazi ukuhlasela laphaya. Ngamanye amagama, kufanele uthole ukuthi ziyini izidingo zabantu ukuze wethule umlayezo obatshela ukuthi ungawuxazulula.
Ngalokhu, amathuluzi afana nokuma kwe-SEO, ukumaketha kokuqukethwe, ukumaketha imidiya yezokuxhumana, ukukhangisa ... kuzoba ngabalingani bakho abakhulu.
Isigaba sesibili sefaneli yokuthengisa siza kithi njengesiphakamiso, isigaba lapho abasebenzisi beza kuwebhu kepha asibazi. Ngakho-ke kufanele sibanikeze okuthile okuzobakhuthaza ukuthi bashiye idatha namandla abo banikeze imikhiqizo ngokususelwa kuzintshisekelo zabo.
Amathuluzi? Amakhasi wokufika, amafomu, okubhaliselwe ...
Labo abaya kulesi sigaba sebevele baxhumana nawe, okusho ukuthi manje usungakwazi thumela imininingwane yomuntu uqobo ukubasiza bakhethe isitolo sakho hhayi esabanye.
Kulokhu kuzofanela uthuthukise ubudlelwano bakho nomsebenzisi, ngokuthumela i-imeyili (okuyindlela ephumelela kunazo zonke futhi njengamanje engatheni kakhulu) noma ngezinye iziteshi ezifana nokwenza ukuvakashelwa kwabo kuwebhu kube ngokwakho (ngesiphakamiso semikhiqizo eyenziwe yaba ngeyakho).
Futhi kwezinye izigaba?
Okunye bathembele kakhulu kubasebenzisi kunakuwe, ngaphandle kokwakha iwebhusayithi enembile, elula ukwenza inqubo yokuthengisa, futhi esheshayo.
Ngabe kucace kuwe ukuthi yini ifanele yokuthengisa nokuthi yenzelwe ini?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-ECommerce » Marketing » Ukuthengisa oku-intanethi » Umsele wokuthengisa: Uyini futhi wenzeleni?
Ulayini womkhiqizo: Iyini, ungayikhetha kanjani, ungayikhulisa kanjani
Uyisho kanjani futhi kanjani imali etholakele kwi-intanethi